आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश र वकिलहरुबीच यस्ता रहे सवाल–जवाफ « Khabarhub
आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश र वकिलहरुबीच यस्ता रहे सवाल–जवाफ
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटहरूमाथि सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र वकिलहरुबीच रोचक सवाल–जवाफ भएका छन् ।
आजको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न किन सक्दैन भनी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बन्ने संभावना नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र ? भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा पुगेका संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानन्याधीश राणाको यस्तो प्रश्नपछि संविधानविद् आचार्यले संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरा काल्पनिक मात्र भएको प्रत्युत्तर दिए। उन्ले भने –‘यो काल्पनिक कुरा हो। अदालतले यो कल्पना पनि गर्न मिल्दैन। संविधानमा लेखेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विघटनमा जाने हो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रक्रिया पूरा हुनु त पर्‍यो नि ! अदालतले यस्तो विषयको कल्पनासम्म गर्न नसक्ने भन्दै अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘अन्तिम अवस्थासम्मसम्म संसद्ले आफ्नो काम गर्नुपर्‍यो। संविधानको धारा ७६ ले सिधै विघटन गर्न दिँदैन। यो धारा र उपधारासहितका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदमा गएपछि मात्र हुने कुरा हो।’
प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७७, आइतबार ५ : ३० बजे